Balastarka amniga ee bisha Maarso ee Galaxy Tab S7 hadda la heli karo | Androidsis
Hal daliil oo dheeri ah oo sheegaya in Samsung ay baytariyada gelisay dhanka cusbooneysiinta, waxaan ku haynaa wararka maanta. Samsung uun baa bilaabay balastarka amniga ee bisha Maarso loogu talagalay Galaxy Tab S7 iyo Galaxy S7 +.
Cusboonaysiintaan waxaa la sii daayay maalinta koowaad ee bisha Maarso, wax si dhif ah u dhacay, laakiin waxay u muuqataa taas waxay noqoneysaa caado wanaagsan shirkadda Korea. Cusboonaysiintaan cusub waxaa ka mid ah mid ka mid ah shaqooyinkii u yimid iPad-ka iyadoo la sii daayay nooca hadda iyaga maamula, iOS 14
Tani waa shaqo cusub oo u oggolaaneysa adeegsadaha inuu si toos ah ugu qoro far qoraal gacmeedka qoraalka. Thanks to shaqadan, waxaan ku qori karnaa S Pen sanduuqa qoraalka adigoon isticmaalin kumbuyuutarka maadaama si toos ah loogu rogi doono qoraalka. Cusbooneysiintan waxaa sidoo kale kujira hagaajinta xasiloonida dareeraha faraha iyo hagaajinta kale ee amniga.
Samsung DeX waxay ka heshaa kororka xasilloonida iyo waafaqsanaanta Dolby. Codsiga Samsung Daily waxaa lagu beddelay Samsung Free, in kasta oo ay weli tahay riyooyinkii hore. Cusbooneysiintan ayaa horeyba looga heli jiray Jarmalka, sidaas darteed waa maalmo kahor intaanay gaarin dalalka intiisa kale halka Samsung ay ku iibiso labada Galaxy Tab S7 iyo Tab S7 +.
Kiniiniga ugu dhameystiran ee ku shaqeeya Android
Adigoon ku darin adeegyada Google, Huawei's Matepad Pro ka baxsan isla'egta haddii aan ka hadalno kiniiniyada waxqabadka sarreeya ee ku jira nidaamka deegaanka ee Android. Sidan oo kale, soo saaraha kaliya ee bixiya xalka dhammaystiran ee kiniiniyada lagu maareeyo Android waa Samsung oo leh Galaxy Tab S7 iyo Galaxy Tab S7 +.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Maarso balastarka amniga ee Galaxy Tab S7 hadda waa la heli karaa